Laga yaabaa 8, 2018 admin
New York Stock Exchange bilaabi laga yaabaa in madal ganacsiga Seeraar
Shirkadda waalidka ee New York Stock Exchange ayaa ka shaqeeya bogg internet ka ganacsiga oo u oggolaan lahaa maal badan oo ay u soo iibsadaan iyo waxay qabtaan Seeraar, sida ay emails iyo waraaqaha viewed by The New York Times iyo afar qof oo warbixin ah oo ku saabsan dadaalka kuwaas oo ka codsaday inuu si qarsoodi ah, sababtoo ah qorshaha weli qarsoodi ah.
Oracle in aan bilowno blockchain-as-a-adeegga madal bishan
Rafaa Software Oracle waxaa oo dhan qarka u saaran inuu si cad u bilaabi lahaayeen madal blockchain-as-a-adeegga bishan. Frank Xiong, Madaxweynaha Oracle ee ku xigeenka group of Service Cloud Blockchain, ayaa sheegay in soo bandhigistaan ​​in shirkadda ujeedadiisu tahay in uu soo jiito shirkadaha labada waaweyn iyo kuwo yaryar, la binta ku saleysan mugga macaamil.
Moscow xeerarka maxkamadda cryptocurrency ku jira guryaha kicitaan
maxkamadda Moscow A ayaa meesha ka oo ay ku jiraan boorsada cryptocurrency oo qayb ka ah guryaha ku waajib kicitaan ee a, garashada furayaasha iyo lacag jeebka ee hantida. Arrinta ahayd in aqoonsiga of milkiilaha jeebka crypto iyo furayaasha suurto gal ahayd ama ma. Maxkamaddu waxa ay xukuntay aqoonsiga waa suurto gal ah iyo in furaha waa in la tanaasushay oo qayb ka ah guryaha caydh ah ee.
The dhacdooyinka ugu muhiimsan ee 2017 ee Community Crypto ah
Seeraar ayaa fiiqan ...
Post Previous:12 bangiyada Chinese blockchain loo isticmaalo 2017
cuprous ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 21, 2018 at 2:15 AM
gangstar ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 26, 2018 at 5:30 PM
clip ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 28, 2018 at 1:39 AM
conn ayaa sheegay in:
mzip ayaa sheegay in: